Museveni iyo Soomaaliya - BBC News Somali
Museveni iyo Soomaaliya
Image caption Maqaayadii Itoobiyaanka ee uu ka dhacay qaraxa magaalada Kampala
Madaxweynaha Uganda ayaa ku baaqay in la soo badiyo ciidamada nabad ilaalinta ee jooga Soomaaliya, kadib markii kooxda Alshabaab ee Soomaaliya ay sheegatay inay ka danbaysay qaraxii ka dhacay Kampala axadii hore, oo ay ku dhinteen in ka badan toddobaatan qof. Musaveni ayaa sidoo kale ku baaqay in ciidamada jooga Soomaaliya la siiyo awood badan.
Madaxweyne Yoweri Museveni wuxuu sheegay in uu rabo in ciidamada Midowga Afrika ee jooga Soomaaliya in la gaarsiiyo labaatan kun oo askari, taasoo ah afar laab inta hadda joogta Soomaaliya oo u badan ciidamada Uganda.
Madaxweynaha Uganda ayaa balanqaaday inuu la dagaalami doono kooxda Alshabaab, taasoo u baahan in la badalo awooda ciidamada Midowga Afrika oo hadda u joogta inay ilaaliso dowladda Soomaaliya iyo inay isdifaacdo oo kaliya. Museveni ayaa lagu yaqaanaa inuu aad ugu tiirsan yahay ciidamada, waana lagu dhaleeceeyaa. In kabadan labaatan sano ayuu balanqaadayay inuu baabiinayo mucaaradka dalkiisa ee loo yaqaan LRA. Laakiin mucaardka LRA ayaa wali ka sameeya qasaarooyin gobolka.
Dadka qaarkood ayaa iswaydiinaya, inay tahay fikrad fiican in Uganda ay faraha la gasho dagaalka Soomaaliya, gaar ahaan markii ay cadaato inay Alshabaab ka danbayasay qaraxii ka dhacay Kampala axadii.